Ọrịa ndị dị ugbu a
Ị na-arịa ọrịa ruo ogologo oge? Ị na-aṅụ ọgwụ mgbe niile? ị na a na-ata ọgwụgwọ na obodo gi, ma obu mgbe gi na agbapu?
Gaa na Medic-Help ma kọwaa nsogbu gị.
Ụfọdụ ọrịa na-efe efe. Nke a pụtara na ọrịa ahụ nwere site n'otu onye gaa na nke ọzọ. Nke a nwere ike ime site n'ikuku, aka ruru, ọbara ma ọ bụ mmekọahụ nakwa dị ka igbo agboo, nsi ma ọ bụ mmetuaka.
Kpọtụrụ Medic-Help ma ọ bụrụ na ị nwere mgbaàmà ndị a. Nke a na-enye aka ichebe onwe gị na ndị gbara gị gburugburu.
E nwere ike na-ebute Ọrịa dịka, gonoriya, hapis, cifilisi ma ọ bụ chlamydia site n'oge mmekọahụ. Mputara nwere ike ịgụnye ihi mmiri, ikọ ọkọ, na oziza, ọnya afọ ma ọ bụ ihe mgbu na mpaghara ihe ijiri buru nwoke ma ọ bụ nwanyi. Otú ọ dị, ị nwekwara ike ibute ọrịa na-enweghị ihe mgbaàmà ọ bụla.
Chebe onwe gị pụọ na ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ. Na-eji condom n'oge mekorita. Ị nwere ike inweta ha n'ụlọ ọrụ ma ọ bụ zụta ha na ndị ọkà mmụta ọgwụ na ndi ahịa ọgwụ ma ọ bụ n'ọtụtụ ụlọ ahịa.
Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla gosiri na ọrịa a na-ebute site ná mmekọahụ, gaa Medic-Help.
Ọ bụrụ na ị maghị ma ị nwere ike ibute ọrịa na-ebute site ná mmekọahụ mgbe ị na-enwe mmekọahụ n'enweghị cọndọm, gaa maka ndụmọdụ na Medic-Help. Echerela ruo mgbe i nwere mgbaàmà.
HIV/ Oria Obiri na-aja ọcha
HIV bụ nje nke na-eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ghara idi. Ị nwere ike ibute nje ahụ n'enweghị ihe mgbaàmà ọ bụla. Ọ bụrụ na ịnọghị na ọgwụ, ọ nwere ike imebi ahụ gị ruo n'ókè nke na ị na-arịa ọrịa. A na-akpọ ya Oria Obiri na-aja ọcha.
A na-ebute ọrịa a site na ọbara, n'oge mmekorita na-enweghị condom, site na ntanetị ndị na-adịghị ọcha, ma ọ bụ site n'aka nne ya nwa e bu n'afọ. Ọ bụrụ na ị nwere nje a, ị nwere ike ibunye ya ndị ọzọ na-enweghị mgbaàmà na-egosi.
Adịghị agwọta HIV / Oria Obiri na-aja ọcha. Otú ọ dị, ọgwụ na-enye aka ịchịkwa nje ahụ na belata mmetụta.
Chebe onwe gi megide HIV / Aids. Na-eji condom n'oge emekorita. Ị nwere ike inweta ha na ha n'ụlọ ọrụ ma ọ bụ zụta ha na ndị ọkà mmụta ọgwụ na ndi ahịa ọgwụ ma ọ bụ n'ọtụtụ ụlọ ahịa.
Na-eji ntanetdị ọcha na ejighi mee ihe maka iji ọgwụ ọjọọ eme ihe iji gbochie ịbute oria.
Gaa maka ọgwụ na Medic / Help ma ọ bụrụ na ị maghị ma ị nwere ike ibute nje HIV / Aids ma ọ bụ ọrịa ọzọ a na-ebute site na mmekọahụ site na mmekọahụ na ejighi condom. Echerela ruo mgbe i nwere mgbaàmà.
Ndị na-arịa ụkwara nta n'ime oge kachasị oke nke izu atọ, nwee ahu ọkụ, ọsụsọ na abalị, ma ọ bụ na ata ahu. A pụrụ ibute ụkwara nta mgbe ndị nwere ahụike na-ekuru ikuku nke ndị ọrịa nwere.
Ụkwara nta dị ize ndụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na a hụ ọrịa a n'oge mbụ, ọ nwere ike ịgwọ ya. Ngwọta ahụ na-ewe ọ dịkarịa ala ọnwa isii.
Ọ bụrụ na ị nwere mgbaàmà ọ bụla nke ụkwara nta, enwerela ọgwụgwọ maka ụkwara nta otu ugboro ma ọ bụ na-akpakọrịta na onye nwere ọrịa a, gaa Medic-Help.
Ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ọgwụ ọjọọ
Mmanya na-egbu egbu, ọgwụ ọjọọ na ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka ị ṅụọ ahụ ma mebie ahụike gị. Ghara iji ọgwụ ọjọọ eme ihe.
Enwere ike ibute ọrịa site na ọbara na ịṅụ ọgwụ ọjọọ, dịka ọmụmaatụ, mgbe a na-eji sirinji agbanye ya.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịsị mba na ọgwụ ọjọọ, na-ejikarị sirinji dị ọcha na nke a na-ejighi iji zere ịrịa.
Enwere ike ịgwọta ma mebie ya. Nnekọrịta Nkwado-Enyemaka. Kpọtụrụ Medic-Help.
Ọria kemmetuta obi/keisimgbaka
Ahụmahụ siri ike ma ọ bụ ime ihe ike - dịka agha, mgbapụ, ịta ahụhụ na ndina n'ike - nwere ike ime ka ahụ ma ọ bụ uche rịaa ọrịa. Ịṅụ mmanya na-aba n'anya ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ ndị ọzọ nwere ike ịrụ ọrụ.
Ọ na-esiri ọtụtụ ndị mmadụ ike ikwu banyere ọrịa uche. Ọ dị mkpa iji ha kpọrọ ihe na ịnata ọgwụgwọ dịka ị ga-achọ ọrịa ndị ọzọ.
Mgbaàmà puru iche nke ọrịa uche na-agụnye ịghara ihi ụra ogologo oge, nrọ ọjọọ, ihe mgbu na-enweghị atụ ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ.
Enwere ike ịgwọ ọrịa uche. Kpọtụrụ Medic-Health
Kịtịkpa bụ ọrịa na - efe efe. Ihe ngosi na-egosi ya gunyere, ikpo ọkụ na akpụkpọ anụ, oko ahu na-egosi na ọ na-apụta na mbụ. Ị nwere ike ichebe onwe gị pụọ na Kịtịkpa site na ịnweta ọgwụ mgbochi ọrịa.
Ọ bụrụ na gị ma ọ bụ nwa gị nwere ihe ịrịba ama nke Kịtịkpa, gaa na Medic-Help.
Ọ bụrụ na i nwebeghị Kịtịkpa, nata ọgwụ mgbochi. Gaa na Medic-Help.
Ndị nwere arubara na-enwekarị ahụ ọkụ, anya uhie, ụkwara na oko ahụ na-acha uhie uhie. Ị nwere ike ichebe onwe gị pụọ na arubara site na ịnweta ọgwụ mgbochi ọrịa.
Ọ bụrụ na gị ma ọ bụ nwa gị nwere ihe ịrịba ama ọ bụla nke arubara, gaa Medic-Help.
Ọ bụrụ na i nwebeghị arubara, nata ọgwụ mgbochi ọrịa. Gaa na Medic-Help.
Diphtheria bụ ọrịa nke traktị nke iku ume ma ọ bụ akpụkpọ ahụ. E nwere ụdị abụọ: diphtheria nke akpịrị na Diphtheria nke akpụkpọ anụ.
Ndị mmadụ nwere diphtheria nke akpịrị na-ariakarị ụfụ n’olu, ahu oku ya na mgbu mgbe ha na-elo. Ihe kachasị egosi diphtheria anụ ahụ bụ ọnyá na-adighi agwọ nke oma. Ị nwere ike ichebe onwe gị pụọ na diphtheria site na ịnweta ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Ọ bụrụ na gị ma ọ bụ nwa gị nwere ihe ọ bụla nke egosi oria diphtheria, gaa Medic-Help.
Ọ bụrụ na ị nwetabeghị diphtheria, nata ọgwụ mgbochi ọrịa. Gaa na Nri-Enyemaka.
Ọkọ akpụkpọ ahụ
Ọkọ akpụkpọ ahụ bụ ọrịa ahu na agbasa agbasa. Ihe na-akpata ya bụ nje ndị na-abanye n'ime ahu.
Etu anụ ahụ si egosi ya na-agụnye ọkọ siri ike, abụ na ọkọ akpụkpọ anụ, nke ka ukwuu n'ime akụkụ anụ ahụ nke ijiri buru nwoke ma ọ bụ nwanyi, n'etiti mkpịsị aka, na nkwojị na nkwonkwo ndị ọzọ, n'okpuru ogwe aka na onuara.
A na-ebute ọrịa ahụ site na imetu ahu n'etiti mmadụ abụọ.
Ọ bụrụ na gị ma ọ bụ nwa gị nwere ihe ịrịba ama nke ọkọ akpụkpọ ahụ, gaa Medic-Help.
Ọria eriri afọ
N'ihe banyere mgbu nke afọ na eriri afọ, ọgbụgbọ, igbo agbo na afọ ọsịsa na-eme, tinyere ahụ ọkụ na ihe mgbu nke afọ . Ndị mmadụ na-arịa ọrịa a na-ejikarị oge dị ntakịrị ewepu nnukwu mmiri
Ọ bụrụ na i nwere ihe ọ bụla gosiri ọria eriri afọ, gaa Medical-Help.
Na-aṅụ mmiri ma ọ bụ tii obere obere.
Jiri ncha na-asa aka gị mgbe niile iji zere ịbunye ndị ọzọ.
Ọrịa ndị ọzọ
E nwere ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ. N'ebe a, ị ga-achọpụta ozi banyere ọrịa ndị kachasị mkpa ndi na-efe efe.
Gaa Medic-Help mgbe mgbaàmà gị adabaghị na ọrịa ndị a kọwara ebe a.